MacOS Sierra: Top Five Things You Need to Know About Apple's New Mac Software - Izindaba Rule
MacOS Sierra: Top Izinto Five You Need to Know About Apple New Mac Software
Siri emazweni on the Mac, Manje ungakwazi ukukopisha izinto phakathi ezahlukene uMac iOS amadivayisi, ideskithophu yakho manje uhlala efwini - futhi konke kungenziwa ngamathebhu
Lesi sihloko osesikhundleni “MacOS Sierra: izinto ezinhlanu top odinga ukukwazi mayelana isofthiwe entsha Apple Mac” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesibili 20th September 2016 13.32 UTC
OS X ufile. Long macOS bukhoma. Apple Isihumusho esisha se-system ayo eqhuba Mac - Sierra - izotholakala for thwebula kamuva namuhla.
Ukuthuthukisa free iyatholakala cishe kunoma yisiphi Mac kusuka sekwephuzile 2009 futhi izotholakala nge Mac App Store kamuva namuhla. Nakuba abanye ungase ufune ukubamba ngokuphazima kweso kokubuyekeza, unikezwa enkingeni yakamuva updates zakuqala, lapha kukhona izinto ezintsha ezinhlanu ukuba ngitholwe yilabo ufisa ukushintsha ukuze macOS Sierra.
Siri isiyatholakala kwi-desktop yakho noma laptop. Photograph: I-Apula
Ushintsho esikhulu Sierra nye than gama Siri. Kwenzeka okufanayo izwi umsizi kusukela iPhone and iPad manje kwi-Mac ne izici ezifanayo namaphutha. It ungathola amafayela ngawe ngokusebenzisa ilimi angokwemvelo njengesizathu siqala El Capitan, isethi aphoyintimenti, hlola ukupela, ukudlala umculo bese ekutshela ukuthi iyini sezulu, kepha kakhulu kangakanani kuwe ukuyisebenzisa incike lapho ukusebenza: nozakwethu evulekile-plan ehhovisi lakho ngeke bathande iqiniso lokuthi wena nje waqala ukukhuluma kwikhompyutha yakho.
2. ibhodi yokunamathisela Universal
ibhodi yokunamathisela Universal kusho ungakwazi ukukopisha emshinini eyodwa bese unamathisela kwenye ngaphandle kokuba athumele amafayela noma ukuxhumana phakathi kwalezi ezimbili. Photograph: I-Apula
Wake wafuna namathisela into phakathi ezimbili Macs noma Mac and an iPhone noma iPad? Manje unga. Vele ukukopisha into emshinini owodwa, hit unama ngakolunye bese ulinda. Ngezinye izikhathi kuthatha isikhathi, kuye ngokuthi indlela enhle uxhumano lwakho, kodwa isebenza ngokumangalisayo kahle. Kuphumela umbhalo, izithombe kanye nezinye izinto eziningi ungase ukopisha ebhodini lokunamathisela.
3. ICLOUD drive bekhompuyutha
iCloud Drive ethutha amafayela kwi-desktop yakho phakathi imishini. Photograph: I-Apula
Nakuba abanye zihlelwe futhi sigcine yonke amafayela zabo kumafolda wahlelwa ngokucophelela, abaningi nje baye konke silahlwe kwideskithophu sahluthulela emshinini single. Manje iCloud Drive desktop ungavumelanisa amafayela namafolda kwideskithophu phakathi imishini kanye iPhones noma iPads, ngakho konke akuhleliwe iyatholakala imishini amaningi.
4. Konke ithebhu manje
Buka imibhalo kanye nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi-window in umbono ngamathebhu, njengoba ubuka ividiyo kuxaka phezu ngesikhathi esifanayo ne picture-in-picture ukubonisa. Photograph: I-Apula
Manje interface ngamathebhu kickstarted iziphequluli ufikile konke ucishe e Sierra. Kusukela umbhalo abahleli izithombe ukuhlela, Ibhajethi zokusebenza kanye imeyili, lushaya "Hlanganisa Zonke Windows" option ngaphansi Window ukulahla phansi umudwa ochaza ngesimo merges amafasitela kusuka lokusebenza eyodwa zibe munye isikhombimsebenzisi ngamathebhu. Akuyona yonke buyakusekela ngokushesha, futhi abanye ukuthi unalo usebenzise isigamu-wabhaka, kodwa uma ufuna amathebhu yonke indawo on a Mac, Manje ithuba lakho.
5. Apple Pay, iOS 10 izici nokuningi
Buka izinkumbulo zakho ngaphakathi Izithombe. Photograph: I-Apula
Ngaphandle izici big Mac, MacOS Sierra futhi unezela ukuhambisana izici eziningi ezintsha kusukela iOS 10. Manje ungakwazi ukukhokhela izinto usebenzisa Touch yakho ID inzwa on iPhone yakho kuwebhu, ungathumela wengxoxo izinto eziwubukhazikhazi iOS 10 abasebenzisi in Imilayezo, buka ama kusingathwa Quicktime Player ewindini ezintantayo, ngisho uvule Mac yakho usebenzisa i-Apple Watch, uma ungumnikazi eyodwa. Apple Music in iTunes manje ubukeka more like the version iOS kakhulu, kanye nezinhliziyo ezichichima izinkumbulo isici kusuka iOS ifotho lokusebenza manje MacOS Sierra ifotho lokusebenza. MacOS futhi uthembisa ukukhulula isikhala Mac yakho ngokugcina amafayela engasetshenziswanga ngaphakathi ICLOUD drive, kodwa kungakanani isikhala kungaba ukukhulula kuxhomeke kulokho izinhlobo amafayela ezidla hard drive yakho.
iOS 10: phezulu 10 izinto odinga ukukwazi mayelana isofthiwe entsha Apple iPhone and iPad
Konke okusha 2014 BMW X5 debuts: Konke Uke Wa ...
10 the best travel zokusebenza
'Umuzi aluhlaza' eYurophu tests l ...
3 izinyathelo ezilula ukuthola ukuthi tan ephelele usebenzisa self ta ...
18593	4 Peter	Septhemba 21, 2016
← Apple Yembula iPhone Manzi 7 BlackBerry Ukuze Misa Ukwenza Phones ! →
Huawei MateBook X Pro ukubuyekeza
Samsung Galaxy S9 + ukubuyekeza
Izipikha smart: Umhlahlandlela lomthengi
-Feb 27, 2018
Apple HomePod Ekugcineni Iyatholakala ukuze Thenga
UJan 25, 2018
UJan 7, 2018